WWDC izu, iMac Pro, HomePod na ndị ọzọ. Kacha mma izu na m si Mac | Esi m mac
WWDC izu, iMac Pro, HomePod na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Obi abụọ adịghị ya na akara ngosi Apple bụ nke a na-eme na McEnery Convention Center na San Jose, Mọnde gara aga, June 5. Ebe ọ bụ na nkwenye gọọmentị nke Apple maka isi okwu WWDC, asịrị na nkwụsị adịghị akwụsị ịbịaru banyere ihe anyị nwere ike ịhụ na ihe na-abụghị, ugbu a isi okwu agafeela yana nzukọ ndị emere maka ndị mmepe na ụbọchị ndị na-esonụ. N'ime izu ahụ dum, anyị ahụla ezigbo akụkọ na Mac nso, ihe ngosi 10,5 nke anụ ọhịa iPad na ọkachasị HomePod ọkà okwu ụlọ nke Apple mere nke nwere ihe ngosi A8 n'ime. Na mgbakwunye na ngwaike niile emelitere na nke ọhụụ anyị ahụlakwa mmezi na macOS High Sierra, iOS 11, watchOS 4 na tvOS.
Ya mere, anyị na-aga n'akụkụ na dịka anyị ji n'aka na ọtụtụ n'ime ndị nọ ugbu a maara akụkọ banyere ụmụ okorobịa si Cupertino na WWDC nke afọ a, anyị malitere na ịmata na mbụ onyinye Apple nyere ndị bịara, a A na-ahazi jaketị Livaị maka oge ahụ na ntụtụ.
Na Macs ọhụrụ anyị nwere ike ịkọwapụta ihe iMac Pro, ezi anụ ọhịa nke ụdị ya na ike kacha ike desktọọpụ Apple nwere taa. Ngwa a bụ maka ndị ọkachamara na nhazi ntọala ya na-amalite na $ 4.999, yabụ anyị achọghị iche n'echiche ụdị kachasị ike. N'ezie, anyị na-eche kọmputa ihu na nwere obi ọjọọ nkọwa.
Banyere ngwaahịa ọhụrụ nke Apple gosipụtara, ihe HomePod, anyị nwere ike ikwu na ọ masịrị anyị. Mmetụta izizi dị ezigbo mma na ọnụahịa ahụ nwere ike ịbụ naanị nsogbu maka nnukwu akụkụ nke ndị ọrụ ma onye ọ bụla na-aghọta ma na-azụta ndị a na-ekwu okwu maara na ha adịghị kpọmkwem ọnụ ala.
N'ikpeazụ anyị enweghị ike ịhapụ anyị macOS High Sierra. Bụ ọhụrụ version nke sistemụ maka Mac Ọ dịlarị n'aka ndị mmepe na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ụdị beta nke ọha maka ndị chọrọ ịnwale ma hụ atụmatụ ọhụrụ niile agbakwunyere. Na weebụ ị ga-achọta ozi ndị ọzọ gbasara ihe mere na Mọnde gara aga, June 5, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ akụkọ banyere WWDC, ngwaike na ngwanrọ nke Apple gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » WWDC izu, iMac Pro, HomePod na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
MacBook ohuru a bu ihe eji acho oru?
Ngwọta ma ọ bụrụ na Apple Watch gị anaghị agwa gị oge gị na Minnie na Mickey kwurịtara